ဧရာဝတီ| January 29, 2013 | Hits:10,041
| | တရုတ်လုပ် PTL02 ဘီးတပ်တင့်ကားများ UWSA က ရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ဘက်ရေးရာ မဂ္ဂဇင်း “ဂျိန်းစ် ထောက်လှမ်းရေး အစီရင်ခံစာ”က ရေးသားသည် (ဓာတ်ပုံ- Tianxue military forum)
မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလားအာဆီယံ၏ အားနည်းချက်က တရုတ်အတွက် အားသာချက် ဖြစ်နေဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ် လက်မခံ၍ ဟောင်ကောင်သားများ ဆန္ဒပြဝ ဒေသ တရုတ်စာ၊ တရုတ်စကား လွှမ်းမိုးမှု လျှော့ချနိုင်မလားတရုတ် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့်သာ ဖောက်လုပ်ခဲ့ပုံရ
ရာဇာ January 29, 2013 - 5:12 pm ဟုတ်သားဘဲ…သူတို့ကမှ မရောင်းတာ…မရောင်ဘူးလို့ဘဲ ပြောရမှာပေါ့…..အမှန်တော့ ထောက်ပံ့ကြေး အလကား ပေးလိုက်တာ….ကဲ.မှတ်ကရော
Reply minko January 29, 2013 - 6:47 pm ပေါက်ဖေါ်ကြီးက မရောင်းဘူးဆိုတာ ယုံရုပ်ရေးပြသော်ယုံရခက်ကြီးပါ- ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှိမယ်ဆိုရင် စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက် ချိုးဖေါက်ဘို့ ဆိုတာ သိပ်စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်ဘူး- ဆူဒန် အရေးကုလသမဂ္ဂ မှ စစ်ရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမရပြုရလို့သဘောတူထားပေမဲ့ စစ်ဘက်သုံး ထရပ်ကားတွေ မှောင်ခိုရောင်းချခဲ့တယ်။ ရန်သူ့ စခန်းသိမ်းမိတော့ မိတ်အင် ချိုင်းနားဆိုတဲ့ စစ်ဘက်သုံး ထရပ်ကားတွေ မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါက်ဖေါ်က ခပ်တည်တည်ဘဲနေပြလိုက်တယ်။
Reply မမမ January 29, 2013 - 8:02 pm Trust china. They are forever true,good
Reply pps၁၂၃၄၅ January 29, 2013 - 9:21 pm ဝ တို့ တရတ်ပြည် က ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ကို လက်နက်ရောင်းတယ်။ မြန်မာပြည် က ဝ တိုင်းရင်းသားတွေကို လည်း လက်နက်ရောင်းတယ်။
Reply swe htwe January 29, 2013 - 11:34 pm Only brainless person will believe what the chinese said.
Reply Lightning January 30, 2013 - 12:07 pm It means you are brainless person then. You believe in Thein Sein’s words and his master, Chinese people. Trusting Thein Sein means trusting China too.
Reply Mr Kian January 30, 2013 - 1:45 pm YES, you are absolutely right…! In Burma, there are full of Dictators, Liars, Stupids ,Killers, Rapers ,Mercenaries , Robbers, Selfish ,Mads ,Corrupts , Cronies , Burma way of Fake Democracy ,Fascists , Genocide, Colonialism , Nazism…
Reply မြန်မာပြည်သား January 30, 2013 - 4:38 pm ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံကို brainless ဘောင်းဘီဝတ်များ ဘောင်းဘီချွတ်များ နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် ပြောင်းလဲ အုပ်ချုပ်နေကြ သဖြင့် ယနေ့ အချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည် ကြီး အဖြစ် ရပ်တည်လျှက် ရှိပါကြောင်း…